အဖွား နာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှ တဲ့…ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့…ကတော်ပီပီ ရုပ်ချော အပြောကောင်း ပေါင်းတတ်သင်းတတ်… ပြည်မြို့လယ်မှာ တိုက်ကြီး နှစ်လုံးတောင် ပိုင်တာရယ်….
အဖွား နာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှ တဲ့…ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့…ကတော်ပီပီ ရုပ်ချော အပြောကောင်း ပေါင်းတတ်သင်းတတ်… ပြည်မြို့လယ်မှာ တိုက်ကြီး နှစ်လုံးတောင် ပိုင်တာရယ်…. သားသမီးမထွန်းကားခဲ့တော့ အဖွားအမျိုးသား ရဲမှူးကြီးဆုံးတော့ အဖွားက တူတွေ၊ တူမတွေနဲ့နေတာရယ် ဒီလိုနဲ့ အဖွား ချော်လဲ ပေါင်ကျိုးတော့ အဖွားရဲ့ တူတွေ တူမတွေက အဖွားကို အခန်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပြီး ထမင်းတောင် အဝကနေ ခွက်ခေါက်ကျွေးတာရယ်…အဲ့လောက်ထိတော်တာ… ဒီလိုနဲ့ ပုံ့တို့နဲ့ အဖွား ရေစက်စဆုံခဲ့ကြတာက ၂၀၁၆ ခုနှစ်…ပုံ့ ခိုကိုးရာမဲ့ အဘိုးအဖွားတွေကို အိမ်လေးငှားပြီး စောင့်ရှောက်မယ်လို့ fb တင်ရုံရှိသေး အဖွားတူမတွေက ပုံ့ကို ဆက်သွယ်လာတယ် ပို့ချင်လို့ပါပေါ့… ပုံ့ကလဲ အိမ်မငှားရသေးတော့ ခဏစောင့်ပါပေါ့…ဒါနဲ့ …
ချစ်တဲ့သူအပေါ် အရမ်းကို ရိုတတ်တဲ့ ရာသီခွင် (၅) ခု အချစ်မှာ ရိုတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ပုံမှန်သမားရိုးကျ သွားနေတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေထက် တစ်ခါတစ်လေမှာ ရိုးအီမသွားအောင် romantic ဆန်ဆန် ချစ်ပြဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းက ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ romantic ဆန်တဲ့ လှည့်ကွက်လေးတွေကို သဘောကျတတ်ကြတာ ထုံးစံပါ။ ဒီရာသီခွင်တွေကတော့ ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို ရိုတတ်တဲ့ ရာသီခွင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Pisces Pisces တွေနဲ့သာ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သူတို့နဲ့ ချိန်းတွေ့ချိန်တိုင်းဟာ သင့်အတွက် အမှတ်ရနေစေမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အရမ်းကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ ချိန်းတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အရာတွေက သင့်ကို မရိုးအောင် …
သူတို့ဆီက အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း တစ်ချို့ အသားအရေ စိုပြေလှပမှူဟာ အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်… နုပျိုလှပမှူကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှူများ တိုးပွားလာစေပြီး ကျန်းမာ သက်ရှည်စေပါတယ်။ ပုံမှန်အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေ များစွာရှိပေမဲ့ ဓာတုဆေးဝါး ကင်းပြီး မိမိတို့ လက်လှမ်းမှီတဲ့ အရပ်မှာ အလွယ်တစ်ကူ ရှာဖွေယူနိုင်တဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းမျာနဲ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ ပိုမို ထိရောက်စေပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာက အလှပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင် ကျန်းမာစိုပြေတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေဖို့ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြတဲ့ နည်းစနစ် အချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ နနွင်းရဲ့ကောင်းခြင်း သဘာဝ ပစ္စည်းများထဲမှာမှ အကျိုးထူး များစွာပေးတဲ့ နနွင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းကျိုးများ …
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ ကိုရီးယားသူတွေရဲ့ အသဲကို ခိုးသွားတဲ့ ဂျီမင်
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ ကိုရီးယားသူတွေရဲ့ အသဲကို ခိုးသွားတဲ့ ဂျီမင် ကိုရီးယားဘိုး က ပြုလုပ်တဲ့ ဆာဗေးတစ်ခုမှာ တောင်ကိုရီးယားက ကောင်မလေးတွေရဲ့ အသဲနလုံးတွေကို ဘီတီအက်စ် အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျီမင်က ခိုးယူသွားပါတယ်လို့ ဖော်ပြ ပါရှိပါတယ်။ ဆာဗေးက ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ ဘယ်သူ့ကို ချောကလက် ပေးချင် သလဲလို့ မေးခွန်းကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ဆန္ဒပြုခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ကေပေါ့က နာမည်ကြီး ဘီတီအက်စ် ဝိုင်းက အဆိုတော် သီချင်းရေးသမားလေး ဂျီမင်ကို ဗုတ်တင် ဝိုင်းပေးလိုက်လို့ နံပါတ်တစ် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်း ဆီ ခိုင် နေ ရာ ကို ရ ခဲ့ ပါ တယ် …
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ် တွေ မြင်တွေ့ ရတော့မယ့် ယွန်းဝတီလွင်မိုး
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ် တွေ မြင်တွေ့ ရတော့မယ့် ယွန်းဝတီလွင်မိုး နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် လွင်မိုးဟာ ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင် အားပေး ရတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးပါ ။ လွင်မိုးရဲ့ သမီး အကြီး ဖြစ်သူ ယွန်းဝတီလွင်မိုး ကလည်း လူငယ်ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်းကျော် လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ မှာတော့ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီး အတွက် သရုပ်ဆောင် …
မက်ဆီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ အကျေနပ်ရဆုံး အရာကို မကွယ်ဝှက်တမ်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား ခဲ့တဲ့ အမ်ဘတ်ပီ
မက်ဆီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ အကျေနပ်ရဆုံး အရာကို မကွယ်ဝှက်တမ်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား ခဲ့တဲ့ အမ်ဘတ်ပီ ပီအက်စ်ဂျီ လူငယ် ကြယ်ပွင့် အမ်ဘတ်ပီက သူ့အနေနဲ့ မက်ဆီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်ရတဲ့အရာ တစ်ခုကို ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဆိုတာ (၂၁) ရာစုရဲ့ အလင်းလက်ဆုံးကြယ်တစ်ပွင့် အဖြစ် တင်စားခံရသူ ဖြစ်ပြီး အမ်ဘတ်ပီဟာ ဘောလုံး လောက အတွင်း မက်ဆီတို့ရဲ့ ဆက်ဆံသူ အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထား ရသူပါ ။ မက်ဆီဟာ Ballon d’Or ဆုကို (၆) ကြိမ် အထိ …
နန်းသူဇာနဲ့ လမ်းခွဲလိုက် ပြီလို့ ပရိသတ် တွေကို ထုတ်ပြော လာတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
နန်းသူဇာနဲ့ လမ်းခွဲလိုက် ပြီလို့ ပရိသတ် တွေကို ထုတ်ပြော လာတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် နန်းသူဇာနဲ့ အဆိုတော် ကျော်ထွဋ်ဆွေ တို့က ငယ်စဉ် ကတည်းက ပရိသတ်တွေ အားပေးခဲ့ ရတဲ့ စုံတွဲလေး တစ်တွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာလုပ်လုပ် စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှိလွန်းတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ နဲ့ နန်းသူဇာ ကို ပရိသတ် တွေက နတ်ဖက် တဲ့ စုံတွဲလေး လို့တောင် တင်စား ကြပါတယ် ။ ကျော်ထွဋ်ဆွေ နဲ့ နန်းသူဇာ က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကိုလည်း နှစ်ယောက် …
This Year : 147066
Total Users : 442199
Total views : 1700237